Ny telefaona rehetra izay hanavao ny Android 9.0 Pie | Androidsis
Lisitry ny telefaona izay hahazo Android 9.0 Pie
Eder Ferreno | | Tutorials, Android Version
Efa iray volana izay no tonga tamin'ny fomba ofisialy Android 9.0 Pie eny an-tsena, tsy misy fampandrenesana mialoha. Ny kinova vaovao an'ny rafitra fiasa Google dia mitondra tombony maro. Ny mpanamboatra dia efa miasa amin'ny fanavaozana ny findainy, ary ny sasany amin'izy ireo dia efa manolotra kinova beta an'ny rafitra fiasa ho an'ny maodely sasany.
Eto ambany dia manangona lisitr'ireo rehetra ireo izahay Ireo telefaona izay efa voamarina dia handray ny fanavaozana ny Android 9.0 Pie. Matetika amin'ny tranga maro dia misy fisavoritahana eo amin'ireo mpampiasa. Ka amin'ity lisitra ity dia azonao jerena tsara hoe iza amin'ireo no hanana an'ity fanavaozana ity.
Nanamafy ny mpanamboatra sasany izay ho telefaona voalohany ao amin'ny katalaoginao handray Android 9.0 Pie. Saingy maro no mbola tsy nilaza na inona na inona hatreto. Amin'izao fotoana izao dia avelanay hiaraka aminao amin'ireo finday izay nohamafisin'ny mpanamboatra azy ireo ny fanavaozana azy ireo. Rehefa ampiana maodely vaovao, hampiditra azy ireo izahay.
2 Tena ilaina
Nanambara ilay mpanamboatra Espaniola herinandro vitsivitsy lasa izay ireo telefaona ao amin'ny katalaoginao izay hahazo ny fanavaozana. Na dia amin'izao fotoana izao aza tsy nisy daty nomena ny fanavaozana hahatratra azy ireo. Ireo telefaona izay efa voamarina hatreto dia:
Ny marika ihany koa dia nanambara izany ny findainao irery no hahazo ny fanavaozana. Raha ny marina dia iray amin'ireo voalohany nanana fidirana amin'ny kinova beta izy io. Ka ny zava-drehetra dia manondro fa izy no ho voalohany hanana ny kinova farany sy marin'ilay rafitra fiasa.
Amin'izao fotoana izao, Telefaona Honor roa no nahazo ny beta faharoa an'ny Android 9.0 Pie. Ankoatr'ireo modely roa ireo dia tsy misy hafa voamarina, na dia antenaina aza fa hisy telefaona bebe kokoa ao amin'ny katalaoginy izay afaka manavao. Amin'izao fotoana izao dia izy roa ireto:
Ny mpanamboatra dia nanambara telefaona efatra izay hanana ity fanavaozana ity. Azo inoana fa hisy bebe kokoa, fa ny voalohany kosa, angamba amin'ny faran'ity taona ity, dia ireto manaraka ireto:
HTC U11 Fiainana
Ny mpanamboatra sinoa no iray amin'ireo haingam-pandeha indrindra, satria amin'izao fotoana izao manaparitaka ny kinova beta faharoa an'ny Android 9.0 Pie eo anelanelan'ny telefaonanao sasany. Efa misy ny maodely sasany izay voamarina fa afaka mahazo ity fanavaozana ity. Ireto misy toy izao:
Ilay orinasa no iray tamin'ireo nanambara voalohany iza amin'ireo telefaona ao amin'ny katalaoginao no ho anisan'ireo voalohany nanana ity fanavaozana ity. Amin'izao fotoana izao dia mbola tsy nanomboka nanavao izy ireo, na dia tokony hahazo ny fanavaozana alohan'ny faran'ny taona aza ny sasany amin'ireo maodely ireo. Ireo finday voafantina dia:
Nokia dia iray amin'ireo marika miasa tsara amin'ny resaka fanavaozana, amin'ny tranga maro dia matetika no haingana indrindra. Efa nambara iza amin'ireo telefaona ireo no havaozina amin'ny Android 9.0 Pie. Toy izao manaraka izao ny lisitra:
Ny marika sinoa koa dia efa namela anay angon-drakitra momba ireo fitaovana afaka miditra amin'ity fanavaozana ity. Tsy voamarina avokoa ny telefaonin'izy ireo, fa amin'izao fotoana izao dia efa manana maromaro isika:
Iray volana lasa izay, Sony dia isan'ireo voalohany nanambara hoe iza amin'ireo findainy no hanana fidirana amin'ity fanavaozana ity amin'ny Android 9.0 Pie, ankoatry ny famoahana ireo daty kasaina hanavaozana ity. Ireo finday nofidian'ny orinasa Japoney dia:
Tsy dia niteny loatra ny mpanamboatra sinoa, saingy misy ny telefaon-telefaonany afaka mahazo an'ity fanavaozana ity. Ireo finday voamarina hatreto dia:
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Tutorials » Android Version » Lisitry ny telefaona izay hahazo Android 9.0 Pie
Tahafo i Rambo miaraka amin'ny Retro Rip 'Em Vaovao iray, arcade bibidia hamongorana ny olon-drehetra